विश्वकपमा नेपाल कसरी सहभागी हुने ? सांसद खतिडाको रोचक सुझाव सभामुख महरा मुसुमुसु हाँसे ! || सुनौलो नेपाल
विश्वकपमा नेपाल कसरी सहभागी हुने ? सांसद खतिडाको रोचक सुझाव सभामुख महरा मुसुमुसु हाँसे !
जेठ २७, २०७५ काठमाडौं : रुसमा हुन लागेको विश्वकप फुटबलको रौनक विश्वभर छाएको छ। त्यसमा ३२ देशले सहभागिता जनाइरहेका छन्। नेपालले भने एकदुई पटक छनोट खेल्नुभन्दा विश्वकपमा सहभागिता जनाउन सकेको छैन। नेपाली दर्शकले भने विश्वकपमा आफ्ना मनपर्ने टिमको जर्सी लगाएर र समर्थन गरेर रमाउने गरेका छन्। विश्वकपको विषय दर्शकमाझ मात्र सीमित रहेन।
यसले आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभामा समेत प्रवेश पाएको छ। विश्कवपको विषयलाई संसदमा प्रवेश गराका हुन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विरोध खतिवडाले। उनले आफ्नो भनाइको अन्तिममा यो विषयलाई राखेका हुन्। उनले सुरुमा सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘यो विश्व महोत्सवमा नेपाल कसरी सहभागी हुन सक्छ? खेलकुद मन्त्रालयले के गर्दैछ?’ विश्वकपको कुरा राख्ने भनेर जानकारी गराउँदा सभामुख कृष्णबहादुर महरा मुसुमुसु हाँसेर चासोका साथ सुनिरहेका थिए।